रोकिएन सुनको मूल्य घट्ने क्रम, आज पनि अचम्मित पार्ने किसिमले घट्यो : हेर्नुहोस् कति पुग्यो ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । विहीबार(आज) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ ।नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ९१,५०० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ९१,००० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।आज चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । चाँदी प्रतितोला १,३१५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
यो पनिपढ़नु होस:
एजेन्सी । करिब १० लाख रुपैया खर्च गरेर विवाह गरेपछि बेहुलीले फोन गरेर म त तपाईको श्रीमती होइन जबरजस्ती विवाह गराइएको हो भन्दा वेहुलालाई कस्तो भयो होला ? विवाह गराउने दलालले एउटा केटी देखाएर अर्कै केटीसंग विवाह गराइदिएको रहस्य खुलेको छ । यो घटना भारत राजस्थानमा भएको हो ।
विवाह भएको चार दिन पछि माइत गएकी बेहुलीले फोन गरेर श्रीमानलाई तपाई माथि ठूलो धोका भयो भन्दै सुनाइन् । भोजमा रोटी पकाउन भनेर मलाई बोलाइएको थियो तपाईसंग जबरजस्ती विवाह गराइयो ।
राजस्थानका उम्मेद सिंह माथि यस्तो घटना भएको हो । विवाहका लागि उनले १० लाख रुपैया खर्च गरेका थिए । उनलाई बिचौलिया गंगा सिंहले विवाहको ब्यवस्था मिलाएका थिए ।
केटीको माइती पक्ष आर्थिक रुपले कमजोर छन् उता तिरको विवाहको खर्च पनि तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर उनले उम्मेदसंग उल्दै साडे ३ लाख रुपैया पनि लिएका थिए ।
अहिले उनी न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय गरेका छन् । प्रहरीलाई बताए अनुसार करिब २० दिन अघि गंगा सिंह विवाहको लागि भन्दै उनको घरमा आएका थिए । गंगा सिंहले भने कि मेरो सम्बन्धमा केटी छ, म तिमीलाई विवाह गराइदिन्छु । उनलाई हुनेवाला बेहुली भन्दै पिन्कू कभरलाई देखाइयो । पिन्कुसंग उनको एंगेजमेन्ट भयो ।
वास्तुशास्त्र अनुसार जसले यी उपाय अनुसार घरमा लक्ष्मी भित्र्याउँछन् उनिहरुकाे खुल्नेछ समृद्धिको बाटो, एक पटक अवश्य पढ्नुहाेला